ချမ်းလင်းနေ: ၂၀၁၂ ဒီမိုကရေစီဆုပေးပွဲ နှင့် သတင်းဓာတ်ပုံများ Home
၂၀၁၂ ဒီမိုကရေစီဆုပေးပွဲ နှင့် သတင်းဓာတ်ပုံများ ယခု အပတ်အတွင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၀ါရှင်တန်ဒီစီ မြို့ရဲ့လမ်းတွေပေါ်၊
ရထားတွေ ပေါ်မှာ ဗမာဝတ်စုံ(ဒါမှမဟုတ်) တိုင်းရင်းသားဝတ်စုံတွေ နဲ့အမေရိကရောက်မြန်မာများ ကို လှုပ်လှုပ်ရှားရှားမြင်တွေ့ နေရပါတယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သတင်းစာတွေ၊ ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းတွေ မှာလည်း မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မိန့် ခွန်းတွေ၊ ၂၀၁၂ ဒီမိုကရေစီ ဆုရှင်များရဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေ က ဝေေ၀ဆာဆာ နေရာယူလို့ နေပါတယ်။
ပုံ-၁ စက်တာဘာလ ၁၉ ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ၊ ၂၀၁၂ ဒီမိုကရေစီ ဆုရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးခွန်ထွန်းဦး၊ US Campaign for Burma မှ ကိုအောင်ဒင်၊ မယ်တော်ဆေးခန်းမှ ဒေါက်တာစင်ဒီယာမောင်၊ နာရေးကူညီမှု အသင်း မှ ကိုကျော်သူ တို့က
လက်ရှိမြန်မာ့နိုင်ငံရေး။လူမှုရေး တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများ နဲ့ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန် လိုအပ်ချက်များ ကို ဆွေးနွေးကြပြီး၊ မေးခွန်းများကို လက်ခံဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ (နောက်ထပ်ဆုရှင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်ကတော့
ဆုပေးပွဲ ကို မတက်ရောက်ခဲ့ပါဘူး) ပုံ-၂ ဒေါက်တာစင်ဒီယာမောင် နှင့် ကိုကျော်သူ "အစိုးရဘက်က နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အတွက် နိင်ငံရေးပါတီတွေ နဲ့ ညှိုနှိုင်းဆွေးနွေးတာတွေ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာတွေ ကို ကြိုဆိုပါတယ်။ အလားတူပဲ အခြေခံလူထုတွေ ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ ပညာရေးဆို်င်ရာ ဖွ့ံဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းတွေ မှာ အစိုးရဘက်က လက်တွဲဆောက်ရွက်မှုတွေ ကို မြင်တွေ့ လိုပါတယ်"......."နယ်စပ်ဒေသမှာ မိဘမဲ့၊ မှတ်ပုံတင်မဲ့ ကလေးတွေ အမြောက်အများ ရှိနေပါတယ်၊ သူတို့ တွေ အတွက် အကူညီတွေ လိုအပ်နေပါတယ်" လို့ ဆိုတဲ့ ဒေါက်တာစင်ဒီယာမောင်။ လူမှုရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အတားအဆီးတွေ နဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကျော်သူ က ....
ပုံ- ၃ ဦးခွန်ထွန်းဦး နှင့် ကိုအောင်ဒင် တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ အပစ်အခပ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှုတွေလုပ်ပြီးတဲ့ ကြားက
ဆက်လက်ပြီး စစ်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားနေတယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်က စစ်ပွဲတွေ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်က အရေးအခင်းတွေ ဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု အတွက် ဖြေရှင်းဖို့ လိုနေတဲ့ အခြေအနေတွေ ဖြစ်တယ် လို့ဆို တဲ့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးခွန်ထွန်းဦး။
မြန်မာပြည်တွင်း မှာ ပြောင်းလဲမှု အချို့ ကို မြင်တွေ့ နေရပြီ ဆိုပေမယ့် .....(၁) တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး (၂) စီးပွားရေး နယ်ပယ်မှာ လုပ်ငန်းရှင် တစ်စု
က ပဲ ချုပ်ကိုင်ထားနေတာ မြင်တွေ့ နေရဆဲ (၃) တိုင်းရင်းသားဒေသတွေ မှာ ထိုးစစ်ဆင်နေဆဲ ဖြစ်နေတာမို့အဲဒီ သုံးနေရာမှာ မပြောင်းလဲသေးဘူးလို့မြင်တဲ့ အကြောင်း ပြောဆိုသွားတဲ့ ကိုအောင်ဒင်။ ပုံ- ၄ ***********************************************************************************
ပုံ ၅ မှ ၈ (၂၀၁၂ ဒီမိုကရေစီ ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနား၊ စက်တင်ဘာ ၂၀ရက်) ပုံ - ၅ (၂၀၁၂ ဒီမိုကရေစီ ဆုပေးပွဲ ကျင်းပတဲ့ နေရာ ၊ ၀ါရှင်တန်ဒီစီ Capitol ) ပုံ
- ၈ (နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ရဲရဲ ၀ံ့ဝံ့ စွန့် လွတ် အနစ်ခံမှု များကို ၀ိုင်းဝန်းအသိမှတ်ပြုခြင်းခံရပြီ) ပုံ ၆ ( ၂၀၁၂ ဒီမိုကရေစီ ဆု ကို ပူးတွဲ လက်ခံယူကြစဉ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်) ပုံ ၇ (US Capitol မှာ အခုလို တိုင်းရင်းသား ၀တ်စုံ တွေ နဲ့၊ အပြုံးတွေ ဝေဆာလို့ ) ၂၀၁၂ ဒီမိုကရေစီ ဆုပေးပွဲအခမ်းအနား ကို မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က တက်ရောက် အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မ
လေးစားကြည်ညို ရတဲ့ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး နယ်ပယ် အသီးသီးက ခေါင်းဆောင်တွေ အားလုံး ကို အခုလို တစုတစည်းတည်း ဆုံတွေ့ ရလိမ့်မယ် လို့အိပ်မက်တောင် မမက်ခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဂျွန်မက်ကိန်းအပါအ၀င် အမေရိကန်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ က
အကြီးအကဲတွေ၊ အခမ်းအနားတက်ရောက်လာသူတွေ ရဲ့ မျက်ဝန်းတွေ မှာ လေးစားတဲ့ အရိပ်အယောင်တွေ နဲ့အပျော်အပြုံးတွေ ကူးစက်လို့နေခဲ့ပါတယ်။ မစုဥာဏ်
(NED အကြောင်း အကျဉ်းချုပ်။ ။ ၁၉၈၃ ခု တွင် စတင် ဖွဲ့ စည်းခဲ့သည့် NED အဲန်ဂျီအို အဖွဲ့ သည် US Congress (အမေရိကန်လွှတ်တော်) ၏ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဖြင့်
အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး၊ နိုင်ငံပေါင်း ၉၀ ကျော် တွင် ရုံးခွဲများဖွင့်လှစ်ထားရှိကာ နှစ်စဉ် အဖွဲ့ ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်အတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ ဒီမိုကရေစီ စာစောင်များထုတ်ဝေခြင်း၊ သင်တန်းများပေးခြင်း အပါအ၀င် လှုပ်ငန်းပေါင်းများစွာ ဖြင့် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ
ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုများကို ကူညီပံ့ပိုးပေးနေသည့် အဖွဲ့ ကြီးဖြစ်သည်။ အဲန်ဂျီအို အဖွဲ့ အနေဖြင့် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသော်လည်း၊ US State
Department ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် USAID (
U.S.agency for Development Assistance) မှ နှစ်စဉ် အသုံးစားရိတ်များ ခွဲဝေ ပေးခြင်းခံရသည့် အဖွဲ့ ဖြစ်သည်။၂၀၁၁ ဒီမိုကရေစီ ဆု ကို ဒူနီးရှီးယန်း နှင့် အီဂျစ်နိုင်ငံမှ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူ များ အား ပေးအပ်ခဲ့သည်။) စာရေးသူ
AnonymousSeptember 28, 2012 at 2:06 PMgoodReplyDeleteNay ThurainOctober 28, 2012 at 8:54 PMစာတွေဖတ်ခဲ့ရတယ်...မှတ်လည်းမှတ်ခဲ့ရပါတယ်...အားပေးပါတယ်ဗျာ။ReplyDeleteAdd commentLoad more...
Nay Lin ChanCreate your badge
GiacomoWordpressposterousFacebookFacebook PageMy Unicode Blog Interview with VOA for Collection of Dictionary
၂၀၁၂ ဒီမိုကရေစီဆုပေးပွဲ နှင့် သတင်းဓာတ်ပုံများ ကြေကွဲဖွယ် ဈာပနပွဲ
ဓမ္မဥယျာဉ် ဓမ္မပန်းခင်း ဗုဒ္ဓစာကြည့်တိုက်
အရှင်ဝိစိတ္တသာရ(ဓမ္မဂင်္ဂါ ) အရှင်ဓမ္မသာမိ(အင်္လကာ) ရဝေနွယ်(အင်းမ)
ဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်များအသင်း ထေရ၀ါဒ တို့တိုင်းပြည်
ဓမ္မဝါဒီ အောင်မြေမင်္ဂလာ ဓမ္မရသ ဝိဟာရကျောင်း
ကသစ်ဝိုင် ဝိပဿနာ ထေရဝါဒတက္ကသိုလ်
ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် အနတ္တလက္ခဏသုတ်
ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာ BuddhaNet Dhamma Download
One Dollar Fund The Best Friend
လွန်းထားထား (ဆေးတက္ကသိုလ်) မိုဃ်းဝေး
မောင်စေတနာ ကိုThinker ကိုရန်အောင်
မာ့ခ်၏ကိုယ်ပိုင်အတ္တများ မနောသား မနောဖြူလေး မိုးမြင့်ရှိန်း
မိုးထက်မြင့် လုလင်တစ်ဦး၏အတွေးဆုံမှတ် မြန်မာ့သတင်းနှင့်နည်းပညာ
ဝိုင်း Burma IT Share
Kogee Lay WWM
MMBloggerHelpdesk Myanmar Download
MyanmarITMen My Softwares
ThememagicMonGTC Troj4n Engineer4Myanmar
Myanmar Friends Day Poems
“ ကျွန်တော့်ကို အကူအညီပေးခဲ့တဲ့ အရေးအပါဆုံးအတွေးတစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်ဘယ်တော့သေမလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်မသေခင်မှာ ဘာတွေကို ဘယ်လိုအကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် လုပ်သွားနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့ အတွေးပါ ”မြေပဲပါမောက္ခ ဂျော့ခ်ဝါရှင်တန် ကာဗာ
© ချမ်းလင်းနေ. Awesome Inc. template. Template images by ranplett. Powered by Blogger.